သူ့ဘက်က လမ်းခွဲစကားအရင်ပြောခဲ့ရင်... - For her Myanmar
ချစ်သက်တမ်း ဘယ်လောက်ပဲကြာကြာ လမ်းခွဲဖို့ သူ့ဘက်က စပြောလာပြီဆိုရင်တော့…
မိန်းကလေးအများစုကတော့ ရည်းစားထားပြီဆို တစ်ယောက်ဆို တစ်ယောက်တွဲပြီး ဒီတစ်ယောက်နဲ့သာ ရွှေလက်တွဲချင်ကြတာပါ။ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်လို့ လမ်းခွဲရဖို့ ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်း ပြတ်ချင်းပြတ်တော့၊ ဖြတ်ချင်းဖြတ်တော့ ကိုယ်ကပဲ စဖြတ်ချင်တာပဲ။ အဲဒါ ဘာမာနလဲတော့ မသိဘူး။ အရင် စိတ်ကုန်သူကတော့ ဖြတ်စကား စပြောမှာပဲ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ကွက်ရှိတာက … ကိုယ်ကသာ စပြီး ဖြတ်တယ်ဆိုတာ မပြောတာ မဖြတ်ဖြတ်အောင် မပြတ်ပြတ်အောင် လုပ်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကလည်း မမြင်ချင်မှ အဆုံးပါနော်။
ဆိုတော့.. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ပြတ်ကြစဲကြရဖို့ဖြစ်လာပြီဆို သူ့ဘက်ကစပြီး ဖြတ်စကားပြောလာလို့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အတွက် ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်..
ပြောဖို့လွယ်ပေမဲ့ လုပ်ရခက်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်.. ငါ ဘာအမှားတွေများလုပ်လို့လဲ သူမကြိုက်တာတွေ များ လုပ်နေလို့လား ဆိုပြီး ကိုယ်က အဖြတ်ခံလိုက်ရတော့ တွေးပြီပေါ့။ အဖြေမှန်ကို များသောအားဖြင့် ရှာမတွေ့ပါဘူးလေ။ အသစ်ပဲတွေ့တွေ့ ၊ ကိုယ်ဒဏ်ကိုခံရတာ ကမ္ဘာ့ဝန်ထမ်းထားသလို ခံစားရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့စိတ်နဲ့ မတွေ့တော့တဲ့ သူတွေကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာဖြတ်သွားကြတာမဟုတ်လား။ မိန်းကလေးတွေသာ ချစ်စိတ်၊ သံယောဇဉ်စိတ်နဲ့ သည်းခံထားနိုင်ပေမဲ့ ဒင်းတို့က သည်းမခံဘူးရယ်လေ (သူတို့ကို ကိုယ်တော့ သည်းခံတယ် ထင်မှာပေါ့)… သူကများ ကိုယ်နဲ့မတွဲချင်တော့ဘူးဆိုပြီး စဖြတ်ရင် အတွေးမလွန်ပါနဲ့လို့.. ကိုယ့်အမှားတစ်စက်မှ မရှိလည်း ဖြတ်ချင်တဲ့ကောင်ကတော့ ဖြတ်သွားကြတာပဲ။
ဟင် ငါကတော့ ဘာတွေလုပ်ပေးလိုက်ရတာ ဒင်းက ပြောရတယ်ရှိသေး ဆိုတဲ့ အတွေးတွေတော့ ဝင်မှာပါပဲ… အရင့် အရင်ကတည်းက မပြောချင်လို့ ရန်မဖြစ်ချင်လို့ဆိုပြီး သည်းခံခဲ့သမျှ သူကပဲ လမ်းခွဲတဲ့စကား စပြောတော့ ဘယ်မိန်းကလေးမဆို စိတ်တိုတာပေါ့ ။ တကယ်က စိတ်တို စိတ်နာနေလည်း အလကားပဲ ဟိုက သိတော့တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့ကြောင့် အပေါင်းအသင်းနဲ့မိတ်ပျက်ရ ၊ မိဘကို ဆန့်ကျင်ရ နဲ့ သေးသေးလေးက အစ အကြီးကြီး ကြုံရတဲ့ ပြဿနာတွေအဆုံး ကိုယ်သာ အသိဆုံးမို့ သူက ငါတို့ ဇာတ်လမ်းပြီးပြီဆို ”အေး ဝမ်းသာတယ် ကျေးဇူးပဲ ”လို့သာ ပြန်ပြောလိုက်။ ဒင်းတို့ကပဲ စဖြတ်ရတယ်ရှိသေး… ကိုယ့်ကိုသဘောမကျတော့လို့မှ ဖြတ်ပါတယ်ဆိုကာမှ မသိရင် သူတို့ကပဲ အကြီးကြီး အနစ်နာခံလိုက်ရသလိုပြောတဲ့ ဘဲတွေကလည်း ရှိသေး .. အဲ့လိုမျိုးများကြုံလာရရင်လေ စိတ်နာမနေနဲ့ ။ မတန်ဘူး သိလား။
အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် (မိဘ ၊ မောင်နှမ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ယုံကြည်လို့ရတဲ့သူ၊ ကိုယ်ရင်ဖွင့်လို့ရတဲ့သူ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို ကောင်းကောင်းနားထောင်ပေးတတ်သူတွေကို ဆက်သွယ်ပါ။ ငါ့ ဘဲ ကတော့ ငါကို စဖြတ်သွားပြီဟယ် ဆိုပြီး အဲ့ကောင်ကို ဆဲချင်သလိုဆဲ ကျိန်ချင်သလိုကျိန် ကိုယ်စိတ်ထဲ တင်းထားရသမျှကို ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးသူကို ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒီတစ်ယောက်ပြတ် နောက်တစ်ယောက်ပေါ့လို့ကိုယ့်ဘာသာ အားပေးနေပေမဲ့လည်း နည်းနည်းတော့ ခံစားရမှာပဲလေ။ ဒါဆို ရင်ဖွင့်လိုက် ငါဘာများလုပ်မိလို့လဲဟယ်ဆိုပြီး ငိုချင်သလောက် ငိုချပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ (သူ့ဆီတော့ ဖုန်းမဆက်မိစေနဲ့ပေါ့)။ ကိုယ်ရင်ဖွင့်တဲ့သူက ကိုယ့်စကားတွေကို အေးပေါ့ အေးပေါ့ ဆိုပြီး နားထောင်ချင်နားထောင်မယ်… အကြံပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလည်း ဒီလိုတွေပြင်ပါဆိုပြီး အကြံပေးရင်ပေးမယ်။ ခပ်ကဲကဲသူတွေဆို ငါ နောက်တစ်ယောက်ရှာပေးမယ်ဆိုပြီး အားပေးမှာပဲ စိတ်ချ အသည်းကွဲရင် ဘယ်တော့မှ တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်ဖီးမနေနဲ့ ရင်ဖွင့်လိုက် သူက ပြတ်ပြီဟေ့ဆို ကိုယ်က လိုက်ဆက်နေလည်း ဆက်ထုံးနဲ့ကြိုးဆွေးလေးပဲဖြစ်လေ နော်.. ဆိုတော့ ဂျင်းစိမ်းနဲ့ မိဿလင် သူကြင်မှ ကိုယ်ကြင်ပေါ့..
Related Article >>> ချစ်သူက ခြေလှမ်းပျက်လာတဲ့အခါ …
သူကပဲ ငါ့လိုလူကို ဖြတ်ရတယ်ရှိသေးဆိုပြီး မာနတွေလည်း တက်မိမှာပဲ။ ကိုယ့်အမှားကိုလည်း ကိုယ့်ဘာသာပြန်စဉ်းစားပေါ့။ အဲဒီတော့ အရင်ဆုံး စိတ်ကိုလျော့ထားလိုက်ဦး။ သူ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေ မကောင်းခဲ့တာတွေ နောက်ထားလိုက်ဦး ။ ပြတ်ပြီလို့ ပြောကတည်းက ကိုယ့်အပေါ် စိတ်ကုန်နေလို့ပေါ့ (အနစ်နာခံတာေ တွ ဆိုတာမရှိဘူးရယ်) ဆိုတော့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ သူသစ္စာဖောက်ပြီးဖြတ်သွားတာမဟုတ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်သုံးသပ်ပါ (ခေါင်းအေးရင်ပေါ့) ဒါကတော့ စဉ်းစားသင့်တာပေါ့နော်… သူတို့ပေးတဲ့ အကြောင်းပြချက်ပေါ်မူတည်လို့ပေါ့.. တကယ်လို့များ သူတို့ဖာသာ သစ္စာဖောက်ချင်လို့ အကြောင်းပြချက်တွေ လျှောက်ပေးနေရင်တော့ ခေါက်ထားလိုက်ပါလေ.. ဘာလုပ်မလဲနော်.. အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘူး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ချစ်ရဲ့သားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကြောင့် လမ်းခွဲရမယ်ဆိုရင်တော့ သေချာပြန်စဉ်းစားသင့်ပြီနော်… ဥပမာ – အရစ်တကာ့ ထိပ့်ခေါင်မို့များလား? ချုပ်ခြယ်မှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းနေလို့လား? ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်.. ကိုယ့်အကြောင်းကို ကိုယ်သာ အသိဆုံးမဟုတ်လား…
မိန်းကလေးတွေက ရည်းစားစဖြစ်ရင် ၀%ကနေ စချစ်တယ်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေကတော့ ၁၀၀%ကနေ စချစ်တယ်။ တကယ်မှန်ပါတယ် တွဲတာကြာလာလေလေ အရာရာ သူ့ဖို့ပဲ ဖြစ်လာလေလေပါ ။ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆိုတာ မေ့သွားတတ်တာမျိုးကို ချစ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေက ပိုသိမှာပါ။သူ့ဘာသာ တွဲလာတာ စိတ်ပျက်လို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ ရိုးအီတယ်လို့ထင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ကိုယ့်ထက်သာလို့ စွန့်သွားတာဖြစ်ဖြစ် ဒါ ကိုယ်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပါ။ ကိုယ့်ကို မချစ်တော့တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို သူ့ဘက်ကပဲ အမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောတာ စဖြတ်တာကို ကျေးဇူးသာ ပြေးတင်လိုက်ပါလို့။ မယူခင် ပြတ်တာပဲ ကောင်းတယ် ကလေးလည်း မရှိ ခွေးလည်းမရှိသေးတဲ့ ရည်းစားဘဝ ပြတ်ကြတာပဲ သိပ်ဆွေးစရာမရှိပါဘူး။ ရှိလည်း ခဏပေါ့.. ဘာဖြစ်သေးတုန်း နော်…
ဘယ်မိန်းကလေးမှတော့ တစ်ယောက်နဲ့ပြတ် နောက်တစ်ယောက်နဲ့ တန်းကြိုက်ဆိုတာမျိုး မလုပ်တတ်ပါဘူး ( silent မရှိသေးရင်ပေါ့) အရင်လို တစ်ယောက်တည်းဘဝကို ပြန်ရပြီပဲ
စားချင်တာစားစမ်း (အရင်ကတော့ ၂ယောက်အကြိုက်ကို ညှိနေရသေးတယ်မဟုတ်လား )
ဝတ်ချင်တာဝတ်စမ်း ( အရင်က သူ့စိတ်အလိုကျကလည်း နေပေးရသေးတယ်မဟုတ်လား.. ဟိုလိုမဝတ်နဲ့၊ ဒီလိုမဝတ်နဲ့ ဆိုလို့ လက်လွှတ်ထားရတဲ့ ဖက်ရှင်တွေ )
အလှတွေ ပြင်စမ်း (ဟိုလိုမပြင်နဲ့.. ဒီလိုမပြင်နဲ့.. ဟိုလို မကြိုက်ဘူး.. ဒီလိုမလှဘူးဆိုလို့ စွန့်လွှတ်ထားရတဲ့ ကိုယ့်အလှတွေ)
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးပါ( သူက ချိန်းရင် တွေ့ရမှ တခြားကိစ္စတွေဆို သူ့လောက်အရေးမကြီးသလို ပလစ်ခဲ့ရတာတွေ ကိုယ့်ဘာသာပဲ သိမယ်။ ) အဓိကကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပါ.. ကိုယ်သာအဓိကပါ ဆိုတာကို နားလည်ထားရင် ရပြီလေ နော်..
မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ တွဲပြီဟေ့ဆို ယူဖြစ်တာ မယူဖြစ်တာ နောက်ထား ဟိုးအဘိုးကြီးအဘွားကြီးဖြစ်တဲ့အထိ တွေးထားတတ်ကြတာပါပဲ.. ဘယ်လိုပဲ ခိုင်မာနေတဲ့ Relationship ဖြစ်ဖြစ် ပျက်စီးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါ ဘယ်လောက်ပဲ မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်နေပါစေ၊ သူ့ဘက်က ပေါ်တင်စဖြတ်ပြီဆို ရဲရဲသာ လက်ခံလိုက်ပါ။ ပြတ်ပြီးသား ကြိုးအဆွေးကို ပြန်ထုံးလည်း အထုံးတော့ ကျန်မှာပဲ မဟုတ်လား… ကိုယ့်ကို မကြင်နာလို့မှ ထွက်ဖို့ပြင်နေတဲ့သူကို ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆွဲထားဦးမှာလဲ… ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်သာ အရေးအကြီးဆုံးမို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ချစ်ပါလို့ မှာလိုက်ပါရစေနော်…
Tags: broken, Divorced, Heart broken, love, Relationship, Split